Everton oo qaadatay ciyaartoy Senegal ah - BBC Somali
Everton oo qaadatay ciyaartoy Senegal ah
Kooxda Everton waxay qaadatay ciyaartoyga weerarka ka ciyaara ee u dhashay dalka Senegal forward Oumar Niasse oo ay kala soo wareegtay naadiga from Ruushka ah ee Lokomotiv Moscow oo ay uga soo iibsatay lacag dhan £13.5m.
Ciyaartoygan oo 25-jir ah waxaa uu dhaliyay 13 gool muddo 23 jeer ah oo uu u saftay Lokomotiv xilli-ciyaareedkan, waxaana uu saxiixay heshiis afar sano iyo bar ah inuu u ciyaarayo kooxda Everton.
Dhinaca kale, kooxda Stoke City ayaa qaadatay laacibka Giannelli Imbula oo ay kala soo wareegtay kooxda Porto.
Stoke waxay ku soo iibsatay lacagtii ugu badnayd ee abid ay ciyaartoy ku soo qaadato oo ah £18.3m heshiis muddo shan sano iyo bar soconaya.
Ciyaartoygan oo 23-jir ah waxaa uu noqday laacibkii reer Portuguese ee taariikhda lacagta ugu badan lagu iibsado markii uu ku biiray kooxda Porto oo ka bixisay in a £15.1m markii ay kala soo wareegtay kooxda Marseille toddoba bilood kahor.